महिलाले मरिमेट्ने ५ सेक्स पोजिसन ~ The Nepal Romania
महिलाले मरिमेट्ने ५ सेक्स पोजिसन
11:01 AM बिबिध, स्वास्थ्य/यौन No comments
जमाना बदलिएको छ, आजभोली विकसित देशमा मात्रै नभइ नेपाल भारत जस्ता देशमा समेत खुलेर सेक्सको वारेमा कुरा हुन थालेको छ। विशेष गरि पुरुषहरु मात्रै सेक्सका विषयमा बोल्ने, लेख्ने कुरा अव इतिहास बनिसकेको छ। केही समय अघि सम्म सेक्सका कुरा श्रीमानले मात्रै गर्ने र श्रीमती लजाउने प्रचलनलाई अवका महिलाहरुले रद्दीका टोकरीमा फ्याकिदिएका छन् । पूरुषहरुले आफूलाई मन लागेको सेक्स पोजिसनमा यौन क्रियाकलाप गर्ने र महिलाहरुले मौन स्विकृत दिने पुरानो प्रचलनमा ठुलै उलटफेर आइसकेको छ । आजभोली महिलाहरुले खुलेरै आफ्ना सेक्स पार्टनरसंग विभिन्न सेक्स पोजिसनहरुको माग गर्ने गरेका छन् ।आफुलाइ मन लागेको हिसावले यौन क्रियाकलापका बारेमा महिलाहरु खुल्न थालेपछि पुरुषहरुले पनि आफ्ना महिला सेक्स पार्टनरका चाहना र रोजाइ बुझ्नु जुरुरी हुँदै गएको छ । विभिन्न खोज र अनुसन्धानमा आधारित भई महिलाले असाध्यै मनपराउने ५ सेक्स पोजिसनहरु पाठकहरु समक्ष ल्याएको छ । यस्ता छन् महिलाहरु मरिमेट्ने पाँच सेक्स पोजिसनहरु..
१. डग पोजिसनः डग पोजिसनलाई महिलाहरुले त मन पराउँछ नै परुषहरु पनि उत्तिकै
हुरुक्क हुन्छ्न् । यसलाई संभवत सर्वाधिक लोकप्रिय पोजिसन मानिन्छ । प्राय महिलहरु यो पोजिसनको माग राख्ने गर्दछन् ।
२. मिसिनरी पोजिसनः यसलाई नेपाली मा क्षेप्यास्त्र पोजिसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो महिला माथि पुरुष रहेर गरिने परम्परागत सेक्स पोजिसनको हो । प्रायजसो रुपमा यौन जन्य क्रियाकलाप यही पोजिसनबाट शुरु हुने विश्वास गरिन्छ। र केही महिलहरुले यो सेक्स पोजिसनको माग राख्ने गरेका छन् । यो सेक्स पोजिसनमा महिलाहरु आई कन्ट्य्याक्टबाट ज्यादा उत्साहित हुन्छन् ।
३.काउगर्ल पोजिसनः यो सेक्स पोजिसनलाई सवै भन्दा सेक्सी पोजिसन मानिन्छ। यो पोजिसनमा महिला माथी रहन्छन भने महिलाहरु दुइ किसिमले क्रियाकलापमा संलग्न रहन सक्दछन् । धेरै जसो आक्रामक महिलाहरु यो पोजिसनाम यौन क्रियाकलाप गर्न रुचाउछन् ।
४.स्पुन्स पोजिसनः यसलाई साइड बाइ साइड पोजिसन समेत भनिन्छ , यसमा सेक्स पार्टनरहरु एक अर्काको साइटमा चम्चा खप्टिएझै यौन क्रियाकलाप गर्दछन् । यो पोजिसन पनि महिलाहरुले मन पराउने मध्यको एक हो । यस पोजिसनबाट लामो समयसम्म यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन सकिने विश्वास रहेको छ ।
५.स्ट्यान्डिङ पोजिसनः यो पोजिसनमा सेक्स पार्टनरहरु उठेर यौन क्रियाकलापमा संगल्न हुन्छन् । महिला उठेर भित्ता तिर फर्किने र पछाडीबाट परुष संलग्न रहनेको यो पोजिसन प्रति पनि महिलाहरु उत्तिकै आकर्षित छन् ।
महिलाले ढाट्ने कुराहरु
कागजजस्तै पट्याउन मिल्ने मोवाइल !
पहिलो फिल्ममै मस्ति गरे मौसमीका छोराले
पेन्टी लगाउँदाका ५ महत्वपूर्ण फाइदा
एक सय बुद्धिमानको सूचीमा नेपाली शून्य
पोर्न उद्योग अनौठा तथ्यहरु
भारतीय टेलिसिरियलमा बिक्दै उषा पौडेल (भिडियो)
शिशिरको डुप्लिकेटमा नेपाली र हिन्दी फिल्मको फ्युजन...
पर्दामा राम्रा देखिने सुन्दरीहरुको गोप्य कुरा ??
सन्तान चाँडो चाहनेले यस्ता आशनमा सेक्स गर्नुस्
को होला त्यो .... म संग आखा जुधाउने ( New Nepali M...
एक परिवारको खाना खर्च हप्तामा ३५ हजार !
स्कर्टमा ‘लो एङ्गल’ लगाउनेदेखि घीन लाग्छ : ऋचा घिम...
मायालुको माया बिना के होला… ?(भिडियो)
सरकारद्वारा एटीएम प्रदर्शनमा रोक
‘आइ लभ यू’ सँग मिलेकै हो त ‘ग्याङन्याम स्टाइल’
छात्राले घुँडा छोपिने स्कर्ट लगाउनुपर्ने निर्णय कत...
सस्ता चलचित्रहरुमा खेल्ने सोच मैले पालेकी छैन । भा...
सेन्डी’ आँधी पछि अमेरिकामा मुसाको ताण्डव !
समलिङ्गीसँग चुम्बन गर्दा नायक बेहोस
सेक्समा सन्तुष्ट नभएपछि बर्बाद भो जीयाको जिन्दगी
प्रचण्डको रिमिक्स 'पानसमा बत्ती बालेको ' बोलको गीत...
प्रतिभाको सम्मानको लागी :::::
फुल चुडेर लग्यो माली हेरेर बस्यो
आखिर विक्ला कसको जवानी ?
पाँच सय भन्दा बढी ब्लु फ्लिम नेपाल मा नै बन्यो भिड...
ल है साथीहरु हो अब तिहारको देउसी भैलो कार्यक्रम हे...
सेक्स भिडियोपछि हिरोइनको हारगुहार
हिन्दी संगीतमा नेपाली शब्दको डबिङ यसरी गरे चेतनले ...
Full Nepali Movie Takkar Dui Mutuko
अनौठो प्रेम कहानी-रानी राजा बने त राजा रानी (फोटो ...
आखिर किन रोए ओबामा ? (भिडियोसहित)
दाम्पत्य जीवन कसरी सफल बनाउने ?
योनी कसरी कसिलो (टाईट) बनाउने
स्वस्थ रहन नियमित सम्भोग
महिलाहरूलाई यौन चाहनाको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ ?
सेक्स रोमाञ्चक बनाउन सम्भोग-सूत्र
यौन जीवनमा पहिलो चुम्बनको महत्व
महिलाहरू सम्बन्ध किन राख्छन् ?
मेस्सी र रोनाल्डोको ८६९ संयोग
बौलाएको दुनियामा यसरी बेचिन्छ माया (भिडियो)